Alshabaab oo weeraro ku qaaday saldhigyo ciidan
Home WARARKA Alshabaab oo weeraro ku qaaday saldhigyo ciidan
Shabeelle-(Berberanrws)-Al-Shabaab ayaa sheegtay in saaka waaberigii ay weerar ku ekeeyeen labo saldhig oo ciidamada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalooyinka Bariirre iyo Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in markii Salaadda Subax laga baxay ay maqleen dhaqawa qaraxyo culus, kaddibna ay xigtay rasaas muddo socotay.
War ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo lagu daabacay bogagga Internet-ka ee iyaga taageera ayaa lagu sheegay in kooxdu ay cagta mariyeen labo saldhig oo ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin Bariirre iyo Awdheegle. Waxaa kale oo ay sheegeen in halkaas ay ku dileen askar ka tirsan milatariga Soomaaliya oo aanay tiradooda sheegin, iyo inay sidoo kale furteen hub fara badan.
Ilaa iyo hadda ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada kooxda ee ah inay qabsadeen saldhigyadaas.
Weli wax war ah kama soo bixin milatariga Soomaaliya.
Weerarkan ayaa ka mid ah weerarradii ay Al-Shabaab ku qaadi jirtay saldhigyada ciidamada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya. Dhowrkii sano ee ugu dambeeyayna dagaallo ayaa ka dhacayay gobolka Shabeellaha Hoose.
saldhigyo la weeraray
Previous articleSafarkaygii Turkiga ayaan ku Islaamay- Aisha Rosalie
Next articleAabo waa kuma??